सुदूरपश्चिम : स्कुले शिक्षामा पछाडि |
सुदूरपश्चिम : स्कुले शिक्षामा पछाडि
प्रकाशित मिति :2015-09-28 10:01:51
काठमाडाैं, असाेज ११ । ०७१ को एसएलसी परीक्षामा देशभरबाट ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए, तर सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौवटा जिल्लाका चाहिँ ३०.९१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भए । बितेका दश वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजामा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र समग्र देशको तुलनामा जहिले पनि पछाडि छ ।
बितेका १० वर्षमा समग्र देशको तुलनामा सुदूरपश्चिमको नतिजा
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको नतिजामा छात्रका तुलनामा छात्राको अवस्था पनि नाजुक छ । ०७१ को एसएलसी परीक्षामा सुदूरपश्चिमबाट जति छात्र पास भए छात्रा तिनको आधा मात्र पास भए ।
एसएलसीमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका छात्र र छात्रा
देशभरको तुलनामा एसएलसीको नतिजामा सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमकै छात्रका तुलनामा छात्रा कमजोर हुनुका धेरै कारण छन् । चाहिनेजति शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, शिक्षक नहुनु, विद्यार्थीको जग कमजोर हुनु, शिक्षकले नपढाउनु, स्कुलको अवस्था कमजोर हुनु, छात्राले पढाइमा ध्यान दिन नपाउनुजस्ता कारणले यहाँको शिक्षाको अवस्था कमजोर भएको हो ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सरकारले चाहिनेजति स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेको छैन । उदाहरणका लागि बाजुरामा ०७० मा माध्यमिक तहमा एक सय ६९ जना शिक्षक रहेकोमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक ६६ जना मात्र थिए । बाँकी राहत दरबन्दी र स्थानीय स्रोतबाट तलब व्यहोरिने शिक्षकबाट काम चलाइएको थियो । राहत दरबन्दी र स्थानीय स्रोतका शिक्षकले तालिम पाएका हुँदैनन् । स्थानीय स्रोतका शिक्षकको त तलब पनि कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि यहाँको शिक्षा खस्केको छ ।
तर, डडेल्धुराको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमराज बोहरा शिक्षकको योग्यताभन्दा अरू कारणले गर्दा विद्यार्थी फेल भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस स्कुलका सबै शिक्षक पुराना र अनुभवी छन् । तर, ०७१ को एसएलसी परीक्षामा त्यस स्कुलबाट ४९ जनाले परीक्षा दिएकोमा तीनजना मात्रै पास भए । प्रेमराजका अनुसार विद्यार्थीको जग कमजोर भएकाले यसो भएको हो । उनी भन्छन्, ‘तिनै शिक्षकले पढाएका प्राविधिक शिक्षातर्फका विद्यार्थीले भने राम्रो नतिजा ल्याएका छन् ।’
राम्रा विद्यार्थी सबै निजी स्कुलमा जाने र कमजोर विद्यार्थी मात्र सरकारी स्कुलमा आउने भएकाले पनि यसो भएको प्रधानाध्यापक प्रेमराजले बताए । विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहमै बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यहाँ ध्यान नदिँदा जग कमजोर भएको कुरा कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति ऋषिराज लुम्सालीले बताए ।
केही वर्षयता सरकारले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ । यसको अर्थ विद्यार्थीलाई उसले जान्नुपर्नेजति कुरा सिकाइसकेर कक्षामा फेल नपार्ने गरी पठनपाठन गर्नु हो । तर, अहिले विद्यार्थीलाई उसले जान्नुपर्नेजति कुराचाहिँ नसिकाउने र फेल पनि नपार्ने चलन चलेको छ । ‘यसो गर्दा एक–दुई विषयमा मात्र पास हुने विद्यार्थी पनि माथिल्लो कक्षामा जान्छन् । उनीहरूको जग कमजोर हुँदै जान्छ । यसले पनि सुदूरपश्चिम एसएलसी परीक्षाको नतिजामा पछाडि परेको हो,’ डडेल्धुराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दुर्गादत्त विष्टले भने ।
ऋषिराज लुम्सालीका विचारमा सरकारी स्कुलका शिक्षकले पढाइमा भन्दा राजनीतिमा बढी ध्यान दिने गर्नाले पनि शिक्षाको अवस्था खस्केको हो । ‘सरकारी स्कुलका अधिकांश शिक्षक शिक्षकको रूपमा कम र पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा बढी छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीको प्रचारप्रसार गर्ने मोर्चामा काम गर्दा पनि धेरै असर परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी स्कुलको परिणाम चित्तबुझ्दो छैन,’ लुम्सालीले भने ।
निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पुगेर अवकाश पाएका सुदूरपश्चिमका डा. आरडी प्रभास चटौत पनि यस कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘दश बजे स्कुल खुल्छ । शिक्षक १२ बजे पुग्छन् । हाजिर गर्छन् । पढाउनुपर्ने पूरै समयसम्म पढाउँदैनन् । उनीहरू पार्टीमा सङ्गठित छन् । उनीहरूले नपढाउँदा पनि कसैले केही भन्न सक्दैन । स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक भर्ना गर्दा पनि राम्रो मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे राखिन्छ । यस्तो परम्परै बसिसक्यो ।’
शिक्षक युनियनका डडेल्धुरा जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर मडै भने यो कुरालाई नकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी आफ्नो पेसागत हकहितका लागि लड्छौँ । शिक्षकलाई पार्टीगत रूपमा बाँडफाँड गर्नुहुँदैन । स्कुलबाहेकका काम गर्दा हामी विद्यार्थीको पढाइलाई असर नपर्ने गरी शनिबार मात्रै गर्ने गर्छाैँ । हाम्रा सङ्घ–सङ्गठनको जमघटमा पनि हामी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिन्छौँ ।’
मडैले जे भने पनि स्कुलको पठनपाठन कमजोर हुनुमा शिक्षकको ठूलो हात हुन्छ ।
मडैका विचारमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँका स्कुलमा पठनपाठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले एसएलसीको नतिजा कमजोर आएको हो । उनले भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा दिनका लागि हामीकहाँ बिजुली नै छैन । अनकन्टार ठाउँको परिस्थिति जटिल छ । विद्यालयको स्रोत–साधन छैन ।’
सरकारी स्कुलभन्दा निजी स्कुलका विद्यार्थी बढी पास हुने चलन देशभरमै छ । सुदूरपश्चिममा निजी विद्यालय कम भएकाले पनि एसएलसीको नतिजा खस्केको हो ।
निजी क्षेत्रका स्कुल बढी भएका सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा एसएलसीको नतिजा पहाडका तुलनामा राम्रो छ । निजी विद्यालय सबैभन्दा धेरै (निजी तीन सय १० र सरकारी पाँच सय ५७) भएको कैलालीमा ०७१ मा ७३.७३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए । अर्कातिर, निजी स्कुल कम भएको (निजी ३०, सरकारी दुई सय ४७) डडेल्धुराबाट ०७१ मा ४७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका थिए । डडेल्धुराका जिशिअ विष्टका विचारमा डडेल्धुरामा निजी स्कुल थोरै भएकाले त्यहाँको एसएलसीको नतिजा कमजोर भएको हो ।
तर, विष्टको विचार पूर्ण रूपमा सही होइन । निजी स्कुल धेरै भएका कञ्चनपुर र कैलाली ०६२ देखि ०६६ सम्मको एसएलसीको नतिजामा सुदूरपश्चिमका अरू जिल्लाका तुलनामा न अगाडि रहे न त पछाडि नै । यस अवधिमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला अगाडि थिए । ०६७ देखि ०७१ सम्म भने कैलाली सबैभन्दा पहिलो र कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा छन् ।
सुदूरपश्चिमका तराईपछि विकसित मानिएको डडेल्धुरा लगातार नतिजा नराम्रो भएको जिल्ला हो । डोटीको नतिजा पनि एक वर्ष नराम्रो भयो । यी ती जिल्ला हुन् जुन सुदूरपश्चिममा शिक्षाको ज्योति फैलाउन अरू जिल्लाभन्दा अगाडि थिए । डोटीमा ००४ मै स्कुल खुलेका थिए । डडेल्धुरामा पनि ०११ मा स्कुल खुलेको थियो । यसपछि यी दुई जिल्लामा स्कुले शिक्षा द्रुत गतिमा फैलिएको थियो ।
डडेल्धुराको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमराज बोहराका विचारमा छात्राले पढाइमा ध्यान नदिने चलन भएकाले पनि एसएलसीमा छात्रा कम पास हुने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘छात्रा बढीजसो घरको काममा व्यस्त हुन्छन् । उनीहरू विद्यालय त आउँछन्, तर फेसनका रूपमा मात्रै ।’
सो स्कुलबाट परीक्षा दिनेमा ६७ प्रतिशत छात्रा थिए ।
‘बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाहजस्ता चलन त्यहाँ अझै छन् । छाउपडी प्रथा मौलाएकै छ । देउकी प्रथामा कमी आए पनि त्यसका अवशेष भित्रभित्र बाँकी नै छन् । त्यो क्षेत्र अहिले पनि सत्रौँ–अठारौँ शताब्दीमै छ,’ चटौत भन्छन् ।
कञ्चनपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमराज भट्टका विचारमा यहाँ छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चलन अझै राम्रोसँग बसिसकेको छैन । छोरीको बिहे छिट्टै गरिदिने, छोरीलाई अर्काको घर जाने जात ठानेर घरको काममा लगाउने चलनले पनि छात्रा पछाडि रहेको उनले बताए । यसले गर्दा छात्रा पढाइमा कमजोर हुनु अनौठो होइन ।
डडेल्धुराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दुर्गादत्त विष्टका विचारमा डडेल्धुरामा एसएलसी परीक्षा अरू जिल्लाका तुलनामा व्यवस्थित र मर्यादित हुनाले पनि यहाँको नतिजा कमजोर देखिएको हो ।
स्कुले शिक्षा कमजोर हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा देशका अरू भागका तुलनामा पछाडि परेको छ । ‘महिलाले नपढ्दा त दुई–तीन पुस्ता नै अशिक्षित हुन्छ । उनका अनुसार बच्चाको पहिलो शिक्षक आमा हुन् । बच्चाको खानपिनदेखि सरसफाइसम्मको सम्पूर्ण काम आमाले गर्ने हुँदा बच्चाले आमाबाटै सिक्छ । आमा अशिक्षित हुँदा बच्चाको पनि भविष्य अन्धकार हुन्छ,’ लुम्साली भन्छन् ।
शिक्षामा महिलाको अवस्था सुधार्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको स्रोत पनि यस क्षेत्रमा परिचालित गर्नुपर्छ भन्छन् डा. आरडी प्रभास चटौत । ‘गाउँमा शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्न सके, पढेका मानिसलाई गाउँमै रोजगारी दिन सके, महिलालाई स्वावलम्बी बनाउन सके मात्रै प्रगति हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
डडेल्धुराका जिशिअ विष्ट स्कुले शिक्षाको अवस्था सुधार्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अभिभावक तथा शिक्षकलाई पनि सचेत गराइरहेका छौँ । हरेक शुक्रबार विद्यार्थीका घर–घर गएर अभिभावकसँग कुरा गर्ने गरेका छौँ ।’
प्रकाशित मिति २०७२ असाेज ११ गते साेमवार